Tababaraha Napoli oo xalay ku qaras baxay Gabar Wariye ah! | Ciyaaro Online
Home - CIYAARAHA CAALAMKA - Tababaraha Napoli oo xalay ku qaras baxay Gabar Wariye ah!
Tababaraha Napoli oo xalay ku qaras baxay Gabar Wariye ah!
Tababaraha Kooxda Kubadda Cagta ee Napoli Maurizio Sarri ayaa xalay ku qaraaray Gabar Wariye ah kaddib bar bardhicii kooxdiisa ay la gashay Kooxda Inter Milan taas oo meesha ka saartay rajada Napoli ee tartanka SeriA-da.
Gabadha wariyaha ah ayaa weydiisay sida uu u arko natiijada kulanka ka soo baxday iyo in Napoli ay ku guuleysan karto horyaalka Dalka Italy.
Maurizio Sarri ayaa Gabadha wariyaha ah ku yiri , “waxba kuu sheegi maayo waxaad tahay Haweeney,isaga tag”intaas kaddib waxaa uu shirkiisa sharaa’id ku raalli geliyay hadalka qallafsan ee uu ku dhahay gabadhaas.
Napoli ayaa hadda waxaa ay hal dhibic ka hooseysaa Kooxda Juventus oo iyada xalay 2-0 ku dhufatay Kooxda Udinese waxaana baaqi u ah kulan kale oo ay Arbacada soo socota la ciyaari doonto Kooxda Atlanta ee Horyaalka Italy.
Napoli waxaa ay todobaadka dambe la ciyaari doontaa Kooxda Genoa oo ay gurigeeda ku qaabili doonto,iyada oo ciyaartii xalay ee Magaalada Milan ay ku dhamaatay bar barro goolal la’aan ah.